प्रधानमन्त्रीज्यू धरहराबाट के के देख्नुभयो? बिरामी बुवाआमाका लागी अक्सिजनको खोजीमा भौतारीएका छोराछोरी देख्नुभयो कि नाई? प्रधानमन्त्रीज्यू धरहराबाट के के देख्नुभयो? बिरामी बुवाआमाका लागी अक्सिजनको खोजीमा भौतारीएका छोराछोरी देख्नुभयो कि नाई?
प्रजापाल गिरी । आज बिहान मोबाइलमा घण्टी बज्यो एकजना आचार्य थरका मेरो मित्रको, त्यस लगत्तै अर्को फोन उठाए मित्र थानिश्वरजीको दुबैको एउटै कुरा थियो । मेरो यो सम्बन्धको कोभिड बिरामी अस्पतालमा हुनुहुन्छ। डाक्टरले अक्सिजनको व्यवस्था गर्न भन्नुभएको छ, सहयोग चाहियो ।
अक्सिजन जस्तो संबेदनसिल बिषयको व्यवस्थापन गर्न बिरामी को कुरुवालाई भन्नुपर्दा डाक्टर र अस्पताल विवस छन् , लाचार छन् । अक्सिजन प्लान्टवाला एक होईन धेरै मित्र सङ्ग कुरा गरे उनिहरुको आफ्नै बिवसता छ । यस्तो बेला म बिचरा लाचार हुनु त स्वभाविकै भैगयो ।
फर्केर घर आउँदा प्रधानमन्त्रीले हिजो संसदमा विश्वासको मत माग्दा गरेको भाषण हेर्दै हुनुहुँदोरैछ बुवा। मेरा पनि कान,आँखा रोकिए प्रधानमन्त्रीको भाषणमा । प्रम ओलि मुसुक्क हाँसेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो धरहरा बन्यो मैले चढे, तपाईंहरुलाई बिस्वास नलागे गएर चढ्नुहोस । संसद भवन टेबल ठोकाईले गुन्जियो ।
प्रधानमन्त्री झन हौसिए । धरहराको टुप्पोमा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न मन लाग्यो प्रधानमन्त्रीज्यू धरहराबाट के के देख्नुभयो रु सडकमा आफ्ना बिरामी बुवाआमाका लागी अक्सिजनको खोजीमा भौतारीएका छोराछोरी देख्नुभयो कि नाई रुअस्पताल र अस्पतालमा उपचार का लागि शैयाको खोजिमा हिडेका नागरिक देख्नुभयो कि भएन रु आईसियु र भेन्टिलेटरको खोजीमा दौडिएका लाचार नेपालीहरुलाई देख्नुभयो कि भएनरु भोकैनाङ्गै छाना र खाना को खोजीमा एकोहोरीएका विवस गरिब नेपाली देख्नुभयो कि भएन रु भरिभराउ शववाहन र एम्बुलेन्सको ताँती देख्नुभयो कि भएन ? प्रधानमन्त्रीज्यू हामी जस्तै निरीह नागरिकले देखेका र भोगेका ति कारुणीक घटना जो सिंहदरबारबाट देख्नुभएन धरहराको टुप्पोबाट देख्नुभएको भए धन्यवाद अन्यथा प्रधानमन्त्रीज्यू धरहराको टुप्पोबाट पनि उहि सिंहदरबार र बालुवाटार मात्र देख्नुभएको भए तपाईंको दृष्टिमा दोष हुनेछ ? प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं अहिले धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ । तपाईं बिना मौजुदा नेपाली राजनीति अघि बढ्ने सम्भावना पनि कम छ तसर्थ अहंकारको धरहराबाट ओर्लेर गौरवको धरहरा निर्माण का लागि हातेमालो गर्नुहोस् ।
कांग्रेस महाधिवेशन र सदस्यता वितरण